Sake sayishaya iMazembe, ngakho singayiphinda - Tinkler | isiZulu
Sake sayishaya iMazembe, ngakho singayiphinda - Tinkler
UTinkler ujatshuliswe yisenzo seChiefs
Uthi akagxilile koweTKO uTinkler
UTinkler uthi uzoba nzima umdlalo nePirates
Johannesburg - Umqeqeshi u-Eric Tinkler uyazi ukuthi iSuperSport United izobhekana nobunzima kowamanqamu eCAF Confederation Cup, kodwa unethemba lokuthi ezakhe zingenza kahle uma sezibhekene ne-TP Mazembe.
UMatsatsantsa anqobe eTunisia ngo-3-1 ngesikhathi edlala neClub Africain, ngaleyo ndlela azitholela indawo kowamanqamu e-CAF, kanti manje sekusele imidlalo emibili ukuba athathe lesi sicoco sase-Afrika.
UTinkler, okungokwesibili efinyelela kowamanqamu e-CCC esikhathini esiyiminyama emithathu, ukholelwa ukuthi iSuperSport ithola ukuzethemba ekwazini ukuthi amanye amaqembu aseNingizimu Afrika aseke ayishaya iMazembe phambilini, futhi nabo bakwazi ukushaya amagoli amabili ngesikhathi bedlala nayo eLubumbashi kulo nyaka.
I-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns bakwazi ukwehlula izinkunzi zaseCongo emidlalweni yakamuva, kanti nakuba uzoba ngonzima lo mdlalo, uTinkler unethemba.
OLUNYE UDABA: USuthu lushaye uDowns ekhaya
Ekhuluma ngemuva komdlalo, ngesikhathi ebuzwa ngekilabhu azobhekana nayo kowamanqamu, uthe: “Owamanqamu ne-TP Mazembe… Ukhuluma nekilabhu enesipiliyoni esiningi, ikilabhu esike yanqoba iChampions League kanye neConfederation Cup phambilini, kodwa iyikilabhu esesike sadlala nayo, sayishaya.
“Ngibachazelile abadlali ukuthi sidinga ukufika lapha singenakho ukwesaba nakuba besizobe sidlala phambi kwabalandeli abanonya. Nomdlalo we-TP Mazembe kuzomele sibhekane nawo ngaleyo ndlela, singanaki isipiliyoni abanaso. Sike sabahlula phambilini, sisangabahlula futhi.”
Umlenze wokuqala womdlalo wamanqamu uzoba se-DRC ngempelasonto yangoNovemba 18, kanti owesibili uzoba ngempelasonto elandela leyo ePitoli.
I-PSL isicele uBenni ukuba achaze ngokuphawula akwenza ngonompempe
IPremier Soccer League (PSL) isibhalele iCape Town City nomqeqeshi wayo uBenni McCarthy mayelana nokuphawula okwenziwa nguMcCarthy ngomhlaka-25 Novemba 2017 ebhekise konompempe.
Sekuyacaca ukuthi kumele ngingene enkundleni ngidlale - Benni
Umqeqeshi weCape Town City uBenni McCarthy usesabise ngokuthuntutha amakhokho akhe abuyele ensimini uma abagadli bekilabhu bengawanyusi amasokisi emidlalweni yemiqhudelwano neyeligi.
Injabulo kwabadla imbuya ngothi nabathembele emalini yesibonelelo sikahulumeni njengoba uNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba ememezele ukunyuka kwemali yezibonelelo.
Cape Town - 06:26:43 AM STATIONARY VEHICLE towards the CBD - left lane closed Ezinye zasemigwaqeni